China Honey Kuzadza Machine Line fekitori nevatengesi | Higee
Iyi yekuzadza muchina mutsetse inokodzera zvakanyanya kune yakakwira viscosity zvinhu zvichizadza kutora uye kunyora. Tinogona kushongedzera mutsetse wese kubva kumabhodhoro anodyisa kusvikira muteresi wemabhodhoro neiyo yakakwana uchi yekugadzira mutsara.
Huchi Kuzadza Kubata Kutapa Mashini Linear Line
1.Automatic Honey Kuzadza Machine mutsara
Mushini wekuzadza huchi unofanirwa kuzadza huchi hwakasiyana hwehuchi kana yakakwira yekumanikidza mvura mune dzakasiyana PET kana magirazi mabhodhoro ane huwandu kubva pa100ml kusvika 500ml
Bhodhoro rinotenderera tafura feeder uye huchi bhodhoro yekuzadza zvakapindirana mune mumwe muchina. Muchina wedu wakazara otomatiki uye une sainzi uye zvine musoro dhizaini. Zvakare neakanaka chitarisiko uye akazara mashandiro, zviri nyore kushandisa uye kugadzirisa.
Kuchinja kwebhodhoro kuri nyore. Iko hakuna kudikanwa kwekugadzirisa kukwirira kwemuchina kuburikidza nemutsipa wakabata kutakurwa kwebhodhoro. Chete chinoda kushandura mapara zvikamu.
Bhodhoro rinoenda kuburikidza nekuzadza nekutora neabrasion diki. Yekumhanyisa yekuzadza vharuvhu inovimbisa yakakwira kumhanya uye chaiyo mvura nhanho kutonga.
Isu tese tinoshandisa 304 simbi isina simbi kana chiyero chechikafu chekuona mhando yepamusoro yemuchina wedu. PLC yekudzora sisitimu inoshandiswa uye emagetsi zvikamu zviri kushandisa inozivikanwa brand senge Mitsubishi Siemens Schneider zvichingodaro.
Pashure: Yakakosha mafuta yekuzadza muchina mutsara
Zvadaro: Yakakwira Kugona Sirasi Kuzadza Machine Machine